၇၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ၇၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ်
epa05786966 Myanmar State Counselor Aung San Suu Kyi (C) sits among the high ranking military officers as she attends the peace talk with ethnic representatives to mark the 70th anniversary of Myanmar's Union Day ceremony in Panglong of Shan state, Myanmar, 12 February 2017. The Union Day commemorates the start of the Union of Burma on 12 February 1947 which saw representatives of the national races signing an agreement for consolidated unity between highlands and plains to build the sovereign independent Union of Myanmar (Burma). EPA/STRINGER
၇၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ်
၇၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုတဲ့ အခမ်းအနားကို နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းတွေကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ဖို့ရှိနေပါတယ်။
PHOTO – EPA/STRINGER
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ နေပြည်တော် မြို့တော်ခန်းမ ဥပစာရင်ပြင်မှာပြုလုပ်မယ့် ပြည်ထောင်စုနေ့ နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြုမယ့် အခမ်းအနားကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့ ရှိနေတာပါ။
အဲ့ဒီနေ့ မနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၄၀ က စတင်ပြီး မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရုပ်သံလိုင်း NRC၊ မြန်မာအသံရေဒီယိုအစီအစဉ်နဲ့ မြ၀တီရုပ်သံလိုင်းစတဲ့ ရုပ်သံလိုင်းတွေအပြင် တခြားပုဂ္ဂလိက ရုပ်သံလိုင်းတွေကနေလည်း ထုတ်ဖို့ရှိနေတာပါ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း ထုတ်လွှင့်ဖို့ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
၇၁ နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနေ့ အခမျးအနား တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့မယျ
၇၁ နှဈမွောကျ ပွညျထောငျစုနေ့ နိုငျငံတျောအလံအလေးပွုတဲ့ အခမျးအနားကို နိုငျငံပိုငျ ရုပျသံလိုငျးတှကေနေ တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့ဖို့ရှိနပေါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁၂ ရကျနေ့ နပွေညျတျော မွို့တျောခနျးမ ဥပစာရငျပွငျမှာပွုလုပျမယျ့ ပွညျထောငျစုနေ့ နိုငျငံတျောအလံ အလေးပွုမယျ့ အခမျးအနားကို တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ဖို့ ရှိနတောပါ။
အဲ့ဒီနေ့ မနကျ ၆ နာရီ မိနဈ ၄၀ က စတငျပွီး မွနျမာ့ရုပျမွငျသံကွား MRTV၊ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ရုပျသံလိုငျး NRC၊ မွနျမာအသံရဒေီယိုအစီအစဉျနဲ့ မွဝတီရုပျသံလိုငျးစတဲ့ ရုပျသံလိုငျးတှအေပွငျ တခွားပုဂ်ဂလိက ရုပျသံလိုငျးတှကေနလေညျး ထုတျဖို့ရှိနတောပါ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာ့ရုပျမွငျသံကွား MRTV ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာကနတေဆငျ့လညျး ထုတျလှငျ့ဖို့ ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
Previous articleမှနျပွညျသဈပါတီနဲ့ လားဟူဒီမိုကရကျတဈအစညျးအရုံးတို့ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးတှကေနေ ပယျဖကျြ
Next article(၇၁) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို ပုသိမ်မြို့ မှာ ကျင်းပ